Musharaxa Madaxweyne Ee Xisbiga Ucid Ooo Si Adag Uga Jawaabay Hadalkii Wasiir Warancadde Ku Duray Mucaaradka iyo Qaadhaan Bixiyeyaasha | Duul News International
Musharaxa Madaxweyne Ee Xisbiga Ucid Ooo Si Adag Uga Jawaabay Hadalkii Wasiir Warancadde Ku Duray Mucaaradka iyo Qaadhaan Bixiyeyaasha	(Duulnews)-Musharaxa Jagada Madaxweyne ee Xisbiga Ucid Aqoon Yahan Jamaal Cali Xuseen, ayaa si kulul uga jawaabay hadalka Wasiirka Arrimaha Gudaha Maanta ka soo yeedhay ee ku saabsan in Xukumaddu diyaarisay wixii kaga aaddanaa doorashada, islamarkaana uu ku dhaliilay qaadhaan bixiyeyaasha oo uu sheegay inay la habsaameen Lacagtii diwaangalinta codbixiyeyaasha.
Qoraal Jamaal Cali Xuseen Arrimahan kaga hadlay ayaa u dhignaa sidan:-
Waxaan caawa warka HCTV ka daawanaayey wasiirka Arrimaha Gudaha ee Somaliland, mudane Cali Maxamed Warancade oo ka hadlayey arrimaha doorashooyinka. Caawa aad waxaan ula yaabay in wasiirkii Arrimaha Gudahu uu kolba darjiidhayo oo uu caawana faraha la galay arrimaha doorashooyinka oo ay ahayd in Guddida Doorashooyinka Qaranku ay ka hadasho; goormuu Wasiirku noqday afhayeenka Guddida Doorashooyinka Qaranka? mida kale marna xisbigga taladda haya ee Kulmiye na odhan maayo u daaya arrimaha doorashooyinka guddida doorashooyinka sida uu yidhi Gudoomiyahoodda Muuse Biixi; marna arki mayno wasiiro kala hadlaya oo qaar leeyahiin madaxweynaha ayaa loo kordhinayaa; iyo qaar yidhaahda lacagtii may bixinin deeq bixiyayaashu.
Weligay maan arag xukuumad ka nidaam xun oo nin walba halkuu doono u ridaayo. Wasiir Warancadde waxa uu hore u balanqaaday in diiwaan gelintii uu ku carqaladeeyey doorashadda ee Madaniga in ay dhamaanayso bishii December ee kal hore 2014 kii, haddaba meeday Diiwaan gelintaa Madaniga ahi? sowtaa fashilantay sida laga wadda dharagsan yahay ee aan kadhadhkii la wada gaadhsiin Hargeysa iyo goboladda intooda kaleba.
Maanta inuu diiwaan gelinta codbixiyayaasha kaba hadlaa Wasiirka Arrimaha Gudahu may ahayn ee inuu ka hadlo bal halka ay wax marinayaan tii Madaniga ahayd ayey ahayd ee weliba uu isagu madaxa ku sitay.
Lacagta deeq bixiyayaasha waa la hubaa toodda oo gudidda doorashooyinka qaranka ayey u taallaa ee uma taallo inuu wasiirku ka hadlo arrimaha doorashooyinka, Sidoo kale wasiirku waa inuu shaqadiisa iyo kuwa dadka kale ee dawladda kala ogaado ayey tahay, tusaalle ahaan arrimihii Markabkii hubka siday waxay ahayd inuu u dhaafo wasiirka Difaaca, go’aankii degdega ahaa ee ay qaateena mid ceeb ku ah Somaliland ayuu noqday oo waxyaabo aan jirin shacabka ku manjaro habaabiyey.
Arrimihii wadooyinkii Hargeysa ee uu subax qudha uun yidhi waan kala badalay oo qaar baa si uun loo marayaa (one way), taasi shaqadiisa may ahayn ee golaha deegaanka Hargeysa iyo Mayorka ayaa iska leh hawshaasi.
Haddaba nidaamka dawladeed waa inaynu ixtiraamnaa. Wasiir Warancadde wuxuu ka sii afeef dhiganaayey doorashadda 26ka Juun oo uu fashilaadeedda rabay inuu kula gal-gasho cid kale. Walee Falaadhi gigilasho kaagama go’do. Masuuliyadda inay doorashaddu xilligeedii ku qabsoomi waydo dawladda ayaa iska leh iyadaana dalka ka masuul ah; hadalkii madaxweynaha ee inay wakhtigoodii ku qabsoomaana wuxuu u muuqdaa mid beenoobi doona. Waxba yaanu kolba Wasiir hadal aan meelna haysan dadka kula dul kufin. Deeq bixiyayaasha lacagta doorashadda ee ay bixinayaan weligood shaki may gelin; laakiin waxaanu ognahay inaanay xataa dawladdu shubin inteeddii; hawlaha doorashooyinkuna u yaallaan Guddidaa Doorashooyinka qaranka oo xisbiyadda qarankuna ku kalsoon yihiin; ayna ogolaan doonin wixii carqaladaynaya doorashooyinka ee fadlan ha loo daayo Guddida doorashooyinka qaranka.
Dawladdu ha ka dhabayso hadalkeeda oo ha tusto ummadda inay rabto doorasho oo aanay curyaamin hanaankii dimuqraadiyadeed ee uu dalku soo maray ee ay horseedka ka ahayd xukuumaddii UDUB ee iyagoo Kulmiye ahna ay ku yimaadeen kursiga ay maanta ummadda ugu fadhiyaan.
Daawo: Madax-dhaqameedka Reer Borame Oo Ka Hadlay Abaaro Ba’an Oo Ka Taagan Deegaamadda Galbeedka Somaliland,Xukuumadda Baaq U Diray